China Glass PSA Oxygen Generator Plant Mepụta na Factory | Binuo
Ebe nchekwa ikuku
Belata ikuku eruba pulsation maka buffering na usoro nrụgide mgbanwe, nke mere na abịakọrọ ikuku nwere ike were were gafee abịakọrọ ikuku tent na-ewepụ kpamkpam mmanụ-mmiri adịghị ọcha na ibelata ibu nke oxygen & nitrogen ngwaọrụ nkewa. Ka ọ dị ugbu a, mgbe a na-agbanye ụlọ elu adsorption, ọ na-enyekwa nnukwu ikuku ikuku maka ikuku oxygen & ngwaọrụ nkewa nitrogen nke chọrọ maka nkwalite ngwa ngwa n'ime obere oge. Ya mere, nrụgide dị na ụlọ elu adsorption na-ebili ngwa ngwa na nrụgide na-arụ ọrụ iji hụ na arụ ọrụ a pụrụ ịdabere na ya na nke kwụsiri ike.
Ngwaọrụ nkewa Oxygen & Nitrogen
Enwere ụlọ elu adsorption abụọ A na B nwere sieve molekụla pụrụ iche. Mgbe ikuku abịakọrọ dị ọcha na-abanye n'imebata ụlọ elu A wee na-esi na sieve molekụla na-abanye n'ime ya, N2 na-adaba, na ikuku oxygen na-asọpụta. Mgbe obere oge gasịrị, sieve molekụla dị n'ụlọ elu A na-eju afọ. N'oge a, tower A na-akwụsị adsorption na-akpaghị aka, abịakọrọ ikuku na-asọba n'ime ụlọ elu B maka nitrogen absorption na oxygen mmepụta, na reactive na molekul sieve ụlọ elu A. The abụọ ụlọ elu na-ebu adsorption na reactivation alternately iji mezue oxygen & nitrogen nkewa na nọgidere mmepụta. oxygen. Usoro ndị a dị n'elu na-ejikwa programmable logic controller (PLC).
Ihe nchekwa ikuku oxygen na-edozi nrụgide na ịdị ọcha nke oxygen kewapụrụ na usoro nkewa nitrogen & oxygen iji hụ na ikuku oxygen na-aga n'ihu ma kwụsie ike. Mgbe ngbanwe ọrụ nke ụlọ elu adsorption, ọ na-ebunye ụfọdụ gas na ụlọ elu adsorption iji mee ka nrụgide dịkwuo elu ma chebe akwa ahụ. Ya mere, tank tank tank na-arụ ọrụ enyemaka dị oke mkpa na usoro ọrụ.
Ngwa nke PSA Oxygen Generator Planing for Glassing
Teknụzụ ọkụ ọkụ Oxy-fuel
Agbaze iko omenala na-eji ikuku dị ka ihe na-akwado ọkụ ọkụ. Mgbe a na-eji ikuku na-akwado combustion, ihe karịrị 78% nke nitrogen na ihe ndị ọzọ enweghị ike ịmepụta okpomọkụ, ọbụna na-eri ma na-ewepụ ọtụtụ okpomọkụ na usoro combustion. N'ihi ntinye aka nke nitrogen, ọ bụghị nanị na-abawanye ike oriri, kamakwa na-emepụta NOx na ndị ọzọ na-emetọ ihe n'oge okpomọkụ dị elu. Ụdị combustion nke nkà na ụzụ combustion oxy-fuel pụtara mmanụ ọkụ + oxygen, nke a na-ejikarị eme ihe na iko iko nwere uru doro anya dị ka ndị a:
☆ Chekwa mmanụ ma melite uru zuru oke;
☆ Ọnụego mgbaze dị elu;
☆ Belata ikuku NOx ma mee ka ọgwụgwọ flue gas dịkwuo mma;
☆ The kiln combustion na usoro na-kwụsi ike ka mma mkpụrụ na ngwaahịa mma;
☆ Belata oriri nke iko refractories iji nweta mmepụta akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ.
☆ Ndozi nke usoro mmepụta iko dị mma na nke ziri ezi;
☆ Ọ dịghị mkpa ịweghachi ọrụ nke ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ iji belata uzuzu uzuzu nke ọma. Na-efe efe nke ngwakọta nwere ike ịzọpụta ngwakọta ma belata mbuze nke uzuzu na-efe efe na arch top na ara mgbidi;
Ọnụego Nitrogen 3 ~ 400Nm3/h
Nitrogen dị ọcha 90 ~ 95%
Nrụgide nitrogen 0.1 ~ 0.5 MPa(Enwere ike idozi)
Nke gara aga: Osisi PSA Oxygen Generator Pharmaceutical
Osote: VPSA Oxygen Generator
Oxygen Generator ụlọ ọrụ
Ahịa Oxygen Generator ụlọ ọrụ
Mmiri Oxygen Generator
Ọnụ ahịa oxygen Generator Medical
Oxygen Generator Maka Ụlọ Ọgwụ
Oxygen Generator maka Laser ịcha
Oxygen Generator Maka ọrịre
Igwe na-emepụta oxygen
Ọnụ ahịa igwe Generator oxygen
Ọnụ ahịa Oxygen Generator
Hydrogen na Oxygen Generator, Psa Nitrogen, Psa Nitrogen osisi, Holtec Nitrogen Generator, Ọgbọ ike hydrogen, Atlas Copco Ngp,